Vanhu vanodarika zviuru zvinomwe vafora muHarare nhasi zvichitsoropodza zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nevamwe vari muZanu PF nenyika dziri muEuropean Union pamwe vachiti zvakonzera kuti ruzhinji rweZimbabwe rwutambudzike.
Zviuru zvevanhu zvaungana paFreedom Square muHarare zvakatanga kufora zvakananga kunhandare yeNational Sports Stadium zvichiimba zvakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza kudzikwa kwakaitwa zvirango.
Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi “Ma Sanctions Auraya Hupfumi”. Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa ndivo vatungamira vanhu vange vachifora ava nemamwe makurukota ehurumende
Vachitaura kuvanhu ava mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vati zvirango zvakafanana negomarara riri kudya hupfumi hwenyika.
VaMnangagwa vati zvirango izvi zviri kunze kwemutemo uye zvinofanira kubviswa nechimbi chimbi vachitiwo sehurumende vari kuvandudza zvinhu zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzehupfumi, zvematongerwo enyika pamwe nekuti munyika mugare muine runyararo uye kodzero dzevanhu dzichichengetedzwa.
Vati vari kufara kuti zvirango zvavanoti vakatemerwa neEU zvatanga kubviswa kuburikidza nenhaurirano dzavari kuita. Vati nyika yakatemerwa zvirango mushure mekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Vati kutemerwa kwavakaitwa zvirango kuri kukokonzerawo kuti nyika isawane zvikwereti kubva kumasangano anokweretesa mari akaita seIMF ne World Bank nemamwe.
Mumwe wevanga vachiratidzira ava, Amai Gladys Magirazi vati vanogara kuHarare South vati zvirango izvi zvinofanira kubviswa.
VaGabriel Chidarike, avo vanga varipowo pakuratidzira uku vati kushayikwa kwemabasa munyika kuri kukonzerwa nekuvharwa kwakaitwa maindasitiri zvichetevera kutemerwa kwakaitwa nyika zvirango neAmerica ne European Union.
VaMorgan Mambo vatiwo pamusoro pezvirango, nyaya yehuori munyika iri kukonzerawo kuti zvinhu zvibva zvanyanyowoma.
Gurukota rezvehutano, VaObediah Moyo, avo vanga vari mumwe wevaratidziri ava, vaudza Studio 7 kuti zvirango zvakatemerwa nyika ndizvo zviri kukonzera kuti hurumende itadze kubhadhara vanachiremba avo vari kuramwa mabasa.
Zvichakadai, vemamwe mapato anopikisa vari kuita nhaurirano naVaMnangwa muchirongwa chePOLAD vange varipowo pachiitiko chanhasi vakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly, VaLovemore Madhuku, vati kunyange hazvo vachida kuti zvirango izvi zvibviswe, pane zvakakwanda zvinofanirwa kuitwa nehurumende kuti zvinhu zvose zvifambe zvakanaka munyika.
Kunyange hazvo MDC yaVaNelson Chamisa yange isiko kuchiitiko chanhasi ichi, dzimwe nhengo dzebato ravo dzanga dziriko. Imwe nhengo yeMDC isina kuda kudomwa nezita yati zvakakosha kuti vanhu vese munyika vataure nezwi rimwe chete panyaya dzezvirango izvi.
Munyori mukuru muboka revechidiki muZanu PF, VaLewis Matutu vati hazvishamise kuti hutungamiri hweMDC hauna kuuya kuchiitiko chanhasi vachivapomera mhosva yekurudzira nyika dzekumavirira kuti dzitemere Zimbabwe zvirango zvehupfumi.
Asi mutauriri waVaChamisa, VaNkululeko Sibanda, vati hurumende inofanira kuchengetedza kodzero dzevanhu kuti zvirango izvi zvibviswe .
Kuratidzira kwaitwa nhasi kunotevera danho rakatorwa nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC rekuti nyika dziri musangano iri dzibatane dzitaure nezwi rimwechete.
Hurumende yeZimbabwe inoti hupfumi huri kuwira pasi mekuda kwezvirango izvi. Asi veEU neAmerica vanoti Zimbabwe inofanira kuvandudza nyaya dzematongerwo enyika pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu kuti zvirango izvi zvibviswe.